ငြိမ်းချမ်းရေး ချီတက်လမ်းလျှောက်ရာမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ ပြင်သစ်နိုင်ငံသားကို ဖမ်းဆီး
ရန်ကုန်မြို့ကနေ ကချင်ပြည်နယ် လိုင်ဇာမြို့အထိ ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိဖို့ အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ချီတက် လမ်းလျှောက်နေတဲ့ အဖွဲ့ထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ ပြင်သစ်နိုင်ငံသား မစ္စတာ ခရစ္စတိုဖာကို ဒီကနေ့ တောင်ငူမြို့အရောက်မှာ ဒေသဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်တွေက ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒေသဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်တွေက လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနက စာရင်းတွေနဲ့ စီစစ်လိုက်တဲ့အခါမှာ မစ္စတာ ခရစ္စတိုဖာဟာ Tourist ဗီဇာနဲ့ ဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက် တောင်ငူမြို့ကနေ ရန်ကုန်မြို့ကို အစောင့်အရှောက်နဲ့ ပြန်လည်ခေါ်ယူလာပြီး မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ ပြင်သစ်သံရုံးကို တဆင့်လွဲပြောင်းပေးမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သမ္မတရဲ့ ပြောရေး ဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးရဲထွဋ်က ပြောပါတယ်။
ခရစ္စစတိုဖာကို ဒေသဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်တွေက တားဆီးခဲ့ပေမယ့် ကချင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ စစ်ပွဲတွေ ရပ်စဲဖို့အတွက် လိုင်ဇာမြို့ကို ချီတက်လမ်းလျှောက်နေတဲ့ အဖွဲ့ကတော့ တောင်ငူမြို့ကနေ ရေတာရှည်မြို့အထိ ရောက်ရှိသွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
နေရပ်- Mohnyin) (ROK
တိုးရစ်စ်က တိုးမရစ်ဘဲ ၊ ဆန္ဒပြလမ်းလျှောက်လို့မရပါ ။ အစကတည်းက အဲသလိုလုပ်ချင်လျင် ၊ ဆန္ဒပြလမ်းလျောက်ဗီဇာလျှောက်ရပါမည် ။(^_^)
This Government is demonstrating that they are just military dictators with civilian cloths (Fox under sheep skin). This case will only damage their image at the International level BADLY.
Please let them do what they want for peoples,We are watching yours lie if not
yours need to people speak out for Human Rights.
လ၀က အရာရှိများကို မရှင်းလို့ မေးပါရစေ။ tourist visa တရားဝင်ယူပြီး ၀င်လာသူဟာ ပြည်တွင်းမှာ တရားဝင်သွားလာခွင့်ရှိနေတာပဲ မဟုတ်လား။ တားမြစ်ဧရိယာတွေ၊ စစ်တပ်ထဲ၊ နေပြည်တော်ထဲ လျှောက်သွားနေတာမှ မဟုတ်တာ။ ရန်ကုန်တောင်ငူ ခရီးက အမဲရောင် နယ်မြေမို့ tourist တွေ ပေးမသွားဘူးလား။ ဒါ ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးစရာလား။ လုပ်ရပ်တွေက ရှက်ဘို့ကောင်းတယ်။